Constitutional Court Yopa Munguva Inotevera Mutongo Wayo paNyaya Inobata VaMalaba
Chikunguru 16, 2021
Zimbabwe's President Emmerson Mnangagwa is congratulated by the Chief Justice, Luke Malaba, after taking the oath of office during his presidential inauguration ceremony in Harare, Aug. 26, 2018.
Dare repamusoro soro, reConstituitional Court, rati richapa mutongo waro munguva inotevera pachikumbiro chemumwe mugari wekuBulawayo, VaMax Mupungu, avo vari kuda kuti dare iri rirase mutongo wedare reHigh Court wekuti mukurru wevatongi vematare, Chief Justice Luke Malaba, vaende pamudyandigere muna Chivabvu richiti vainge vasvitsa makore makumi manomwe anodiwa nebumbiro remutemo kuvatongi veConstitutional Court vaende pamudyandigere.
Mutevedzeri wemukuru wevatongi vematare edzimhosva, Amai Elizabeth Gwaunza, vati vachizvisa mutongo wavo panyaya iyi munguva inotevera yavasina kutara zvichitevera zvasvitswa mudare iri nhasi nemagweta emativi ose.
Magweta aVaMupungu, VaLovemore Madhuku naAdvocate Lewis Uriri, vaudza dare kuti VaMupungu vari kushushikana zvikuru nemutongo weHigh Court uyo wakati VaMalaba vaende pamudyandigere.
Magweta aya aVaMupungu audza dare kuti mutongo uyu unofanira kuraswa uye hauna simba sezvo uchifanira kutanga watambirwa neConstitutional Court nekuti une chinangwachekusandura bumbiro remitemo yenyika iro ati rakapaswa neparamende rikashandiswa nemutungamiriri wenyika kuwedzera nguva yaVaMalaba pabasa.
VaMadhuku vaudza Studio7 kuti sei vachiti mutongo weHigh Court unofanira kuraswa.
Kunyange hazvo vabvuma kuti mutongo weHigh Court une chinangwa chekusandura bumbiro remitemo, vange vachimirira sangano remagweta echidiki re Young Lawyers Association of Zimbabwe, VaAndrea Dracos, vati VaMupungu havakodzeri kunge vari pamberi peConstitutional Court pamusuoro penyaya yaVaMalaba nekuti havana kunge vari munyaya iyi payakanzikwa kuHigh Court.
Vatiwo havana kuratidza zvikonzero zvinogutsa kuti nyaya yavo ikwanise kunzikwa nedare.
Asi VaMadhuku vati VaMupungu, semumhu wese munyika, zvikuru sei zvizvarwa zveZimbabwe, vanokodzera kuenda kuConstituional Court kana vaona kuti bumbiro remutemo rave kutyorwa.
Mukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum, VaMusa Kika, havana kuenderera mberi nenyaya iyi zvichitevera kuraswa nedare iri, kwechikumbiro chavo chekuti vatongi vedare is vasanzwa nyaya iyi sezvo vakadomwawo pamutongo weHigh Court.
Gweta raVaKika, VaNoble Chinhanhu, vaudza Studio7 kuti vaona pasina chikonzero chekuti vaende kudare nhasi sezvo vachine pfungwa dzekuti vatongi ava havakodzeri kunzwa nyaya iyi.
VaMalaba vvakanzi nedare reHigh Court vaende pamudyandigere zvichitevera kasvitsa kwavo makore makumi manomwe musi wa15 Chivabvu.
Asi mutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, vakawedzera nguva yaVaMalaba pabasa nemakore mashanu vachishandisa Constitutional Amendment Number 2 Act, iyo iri kunziwo nevamwe yakatambirwa nenzira dzinotyora bumbiro remitemo yenyika.
Mumiriri weZimbabwe muAmerica Otaura neZvekuvhota neKutanga Mabhizimi muNyika kweVari Kunze
VaMnangagwa Vanonzi Vokundikana Kuzadzikisa Vimbiso Yavakaita paMotlanthe Commission
Zvizvarwa zveZimbabwe Zvoratidzira muNew York kuMusangano weUNGA
Dare Rinoti Richapa Mutongo Waro Munguva Inotevera paChikumbiro cheMumwe Mudzidzi
Chirwere cheCovid-19 Chovhiringa Zvakanyanya Vadzidzi Vakawanda Munyika